2019-08-08 05:33:23 , ProQual at 2019 Online Promoti…
ProQual at 2019 Online Promotion Program ( 8th Aug to 31st Aug 2019 ) & YEco Job Fair for Business Organizations
သြဂုတ် ၁၀ ရက်နေ့ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ အ လုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပြပွဲ နဲ့ ဆွေးနွေး ဟောပြောပွဲကို ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်နိုင် ပါတယ်။
စနစ်တကျပြောင်းလဲ (Reform) လုပ်လိုတဲ့လုပ်ငန်းများ နှင့် (New Set up) လုပ်ငန်းသစ်စတင်လိုတဲ့ လုပ်ငန်းများ အတွက် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြပွဲမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ProQual Co., Ltd. ရဲ့ ပထမဆုံး Job Fair Promotion Program ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ စနစ်ကို ဖေါ် ဆောင်မယ့် ၀န်ထမ်းကောင်းများ Qualified Employees ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ Promotion Program ကို အထူးစီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ProQual ရဲ့ YEco Job Fair Promotion Program များ
I . Online Registration Promotion
8-Aug-2019 to 31-Aug-2019 အတွင်း ပြပွဲအတွက် On-line Register လုပ်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို Promotion လေးခု ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1) ProQual ရဲ့အထင်ကရ Product တစ်ခုဖြစ်တဲ့
– Finance for Non-Finance People : Financial Management & Tax Awareness
(i) Top Management အတွက် – 50% Discount
(ii) Middle Management အတွက် – 30% Discount
2) Business English for Executive သင်တန်းကို
(i) Top Management – 30% Discount
(ii) Middle Management – 50% Discount
3) Corporate Training တစ်ခုဖြစ်တဲ့
People & Productivity Training – 50% Discount
4) Financial Accounting Service
လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ Data များကို Financial Year or Calendar Year အရ –
 One Year Data ပေးနိုင်လျှင် – Financial Report
 Two Year Data ပေးနိုင်လျှင် – Financial Report & Compare Review
၀န်ဆောင်မှုများကို Price Plan ရဲ့ 30% Discount
တို့ကို (၃)လအတွင်း အသီးသီးရရှိမှာဖြစ်လို့ Online မှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း Register လုပ်နိုင်ရန်အတွက် စနစ်တကျပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုသော အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအားလုံးကို ၀န်ဆောင်မှုအပြည့်ပေးနိုင်ရန် ProQual Teams များက ခင်မင်နွေးထွေးစွာဖြင့် တိုက်တွန်းနှိုးဆော် အပ်ပါတယ်။
Financial Accounting Service ကိုလည်း SMEs လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အမိအရယူပြီး မိမိလုပ်ငန်း စာရင်းများကို စနစ်တကျတည်ဆောက်ပြီး ပြောင်းလဲမည့်ခေတ်စနစ် ဥပဒေတွေနဲ့အညီ တိုးတက်သည့် လုပ်ငန်းစနစ်သစ်သို့ ဦးတည်ချီတက်လိုက်ပါ။
II. Bo၀th Registration Promotion
ပြပွဲနေ့ 10-Aug-2019 ရက်နေ့အတွင်း ProQual Booth မှာ လာရောက် Register လုပ်သောလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အထူးအစီအစဉ် –
(၁) ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအင်အားအသစ်စုဆောင်းလိုတဲ့ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ Recruitment Program, Internship Program, Apprentice Program များ နဲ့ Registration Fee ကင်းလွတ်ခွင့်
• Recruitment Program အတွက် Interview Process တစ်ခုလုံး
(3 times: First, Second & Third Interviews လက်ဆောင်)
• Internship Program ကို ProQual တာဝန်ယူ Operate လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Booth တွင် Registration လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၏ လက်ရှိ Accountant, Cashier စသည့် စာရင်းဇယား ၊ ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်သည့် တာဝန်ယူထားရသည့် ၀န်ထမ်းများအတွက် –
(1) Tax သင်တန်း – 50% Discount
(2) Accounting သင်တန်း – 50% Discount
(3) Excel သင်တန်း – 50%Discount
ဒီ Discount များကို လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် – 10 August 2019 (Saturday)
ကျင်းပမည့်အချိန် – နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအထိ
ကျင်းပမည့်နေရာ – ပင်မဆောင်၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ရွာသာကြီးနယ်မြေ)
စိတ်ဝင်စားသော လုပ်ငန်းရှင် / Top Management များအနေဖြင့် အောက်ပါ Link တွင် Register လုပ်နိုင်ပါပြီ ။
SYSTEMIZE, STRENGTHEN & SUCCEED
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-08 by admin.
← 2019-08-07 08:37:51 , Please admin LCCI level1+2 (F… 2019-08-11 17:03:49 , Please admin LCCI level1+2 (F… →